Teknolojia antsasaky ny fiainana: tsy misy botika
Alatsinainy 28 Febroary 2011 Alatsinainy Martsa 7, 2011 Nick carter
Te-hamafana tsaho vitsivitsy aho. Tsy manohitra izany aho dolara kapitalista. Heveriko fa tsy demonia tokoa ireo mpampiasa vola anjely. Tsy heveriko akory fa ny olon-drehetra dia tokony na afaka "manamboatra" ny orinasany amin'ny fomba mahomby. Mba hanaporofoana izany dia tiako holazaina aminao ny antony # 1 mety ilainao sy ny mpiara-miombon'antoka aminao manomboka tsy amin-kenatra amin'ny fampiroboroboana ny hevitrao antsasaky ny lohan'ny orinasa amin'ny olona manana vola hialany: Half-Life.
Toy ny hoe ny teny hoe "fanombohana" dia lasa mitovy dika amin'ny venture capital, noho izany dia lasa mitovy dika amin'ny "techie." Angamba misy fifandraisana eo. Ny marimaritra iraisana ankapobeny dia ny fanombohana vaovao dia saika fampiharana tranonkala foana, traikefa ara-tsosialy, na solosaina mifanentana amin'ny lohan'ny pin. Ankehitriny, tsy marina foana izany. Saingy, raha izany no izy, dia voatery nandoro ny tenako aho boky ary miaiky fa ny fanombohana rehetra (mihevitra ny fomba [maha-izy azy ireo] tarihin'ny teknolojia rehetra) dia tokony hamafana ny haavony mankany amin'ny VC ary ho be atao.
Ny haitao dia sehatra mitombo haingana. Manantena aho fa tsy hanaitra olona izany fanambarana izany. Lalàn'i Moore milaza amintsika fa ny teknolojia dia avo roa heny isaky ny 2 taona (izay no dikan'izany). Fa ny hafainganam-pandeha izay mila ahiahy ireo mpanombohana dia tsy ny hafainganan'ny fivoaran'ny processeur na ny vidin'ny RAM latsaka. Ny hafainganam-pandeha izay mila ahiahy ireo fanombohana mifandraika amin'ny teknolojia dia ny hafainganam-pandehan'ny fahaverezan'ny hevitr'izy ireo. Ny hafainganam-pandehan'ny antsasaky ny fanombohana.
Raha mampiasa vokatra ianao, dia sosotra, ary alao sary an-tsaina ny fomba iray ahafahanao manao izany tsaratsara kokoa, dia misy ny tahan'ny ilainao hamaritana: Mandra-pahoviana no hanorenako ity vokatra ity, handeha hamonjy tsena, ary avy eo hanangana lamina fitsikerana? Avy eo, manontania tena raha misy olona hikarakara amin'izany. Tena matotra! Moa ve misy olona miahy fa tonga lafatra ny zava-kanto fanadiovan-doha ny VHS raha naharitra folo taona vao nahazo ny anjaran'ny tsena? Hisy olona hiraharaha ny headset misy tariby azo esorina indray mandeha nify manga vazivazy ve? Ireo dia teknolojia resy, tsy tamin'ny mpifaninana rehetra, fa tamin'ny antsasaky ny fiainana. Tamin'ny hazakazaka hampifoha olona dia resy izy ireo.
Raha ny teknolojia momba ny marketing no resahina dia mieritreritra aho fa afaka milaza soa aman-tsara aho fa ny "fiarahamonina" dia iray amin'ireo teny buzz androany. Ary haingam-pandeha ny fiaraha-monina. Fiovana ara-tsosialy isan'andro. Ary, na eo aza ny fambaran'ny hevitra manaparitaka "viral", ny vola sosialy koa. Tsy maimaim-poana ny fiaraha-monina. Tsy afaka mikasa ny hamorona trangam-piarahamonina ianao raha tsy misy fanerena… tsy ho haingana. Haingam-pandeha rahateo no anaran'ilay lalao.
Ka rahoviana no tsy afaka bootstrap izany? Raha miorina amin'ny sehatra sosialy (Twitter na Facebook) ny vokatrao dia mamatsy vola. Raha miankina amin'ny fahalemen'ny teknolojia iray hafa ny teknolojiao (toy ny mpanadio loha na ny setra tsy misy tady tsy misy tariby) mahazo vola. Raha matahotra ny hilaza amin'ny olon-kafa momba ny hevitrao ianao (ao anatin'izany ny mpampiasa vola) satria matahotra ianao fa hangalatra azy, dia mahazo vola. Vinavinanao izay, tsy maintsy miteny amin'ny olona iray ianao na ho ela na ho haingana, mba hahazoana mpanjifa, ary raha tena tsara izany dia hisy olon-kafa handika azy io ary hampiasa VC hanaraka anao haingana eny an-tsena ary hanafaingana anao amin'ny fizarana tsena. Raha maharesy anao ny hafainganana dia mila manana hafainganana ianao.
Fihaonana an-tampon'ny fahombiazan'ny media sosialy 2011